तीजमा झरी, भिडभाड नगर्न प्रशासनको आग्रह – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun तीजमा झरी, भिडभाड नगर्न प्रशासनको आग्रह – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun
तीजमा झरी, भिडभाड नगर्न प्रशासनको आग्रह
२४ भाद्र २०७८, बिहीबार १०:३५
दमौलीः नेपाली महिलाहरुको महान चाड तीज महिलाहरुले आज देशैभर मनाउँदैछन् । पर्वका अवसरमा महिलाले बिहानै ब्रत बसेर परिवारको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दछन् ।
खुकुलो निषेधाज्ञा निरन्तर जारी गरेको प्रशासनले सामाजिक दुरी कायम गरेर मात्र चाड मनाउन आग्रह गरेको छ । प्रशासनले सार्वजनिक कार्यक्रम नगर्न तथा बढीमा २५ जना मात्र मापदण्ड पालना गरेर भेला हुन भनेको छ ।
तर सार्वजनिक तीज कार्यक्रम गर्न भने रोक लगाइएको छ । तीजकै दिन पारेर बिहानैदेखि वर्षा भएकाले यसले पर्वको रौनकमा भने प्रभाव पार्नेछ । तीज पर्वमा दमौली न्युजले चेली तीज टिक टक प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ ।
प्रतियोगितामा सहभागी हुन चाहनेले तीजको भिडियो दमौली न्युजको आधिकारिक फेसबुक तथा भाईबर 9856041375 मा पठाउन सक्नेछन् । उत्कृष्टलाई पाँच हजार नगद पुरस्कार तय गरिएको छ ।
तीजको उत्कृष्ट टिक टक भिडियो बनाउनेलाई दमौली न्यूजको ५ हजार पुरस्कार
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको २४ भाद्र २०७८, बिहीबार १०:३५ 77 Viewed